नयाँ प्रविधि Archives - Lokpati.com
Tag - नयाँ प्रविधि
बैंक / बित्त • विज्ञान-प्रविधि
काठमाडौं। पछिल्लो दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इन्टरनेट बैंकिङ्ग वा अनलाइन बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दो छ। अर्कोतर्फ इन्टरनेटको सहजता र बैंकहरुले दिँदै आएको इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवामा मानिसहरुको...
आजदेखि इक्यान शैक्षिक मेला : के-के छन् विशेषता ?
काठमाडौँ। इक्यान शैक्षिक मेलाको १४ औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदै छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले यसपटक भर्चुअल एजुकेसन मेला आयोजना गरेको हो।
सोमबार सकिने चारदिने मेलामा करिब एक लाख...
आयो रोबोटले चलाउने बस
एजेन्सी। प्रविधिले दिन प्रतिदिन नयाँ चामत्कारी आविस्कार गरिरहेको छ। नयाँ आविस्कारमा छलाङ मारिरहँदा चीनले ‘डिजिटल चाइना’ अभियान अन्तर्गत स्वचालित पाण्डा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ।
उसले फुझाऊमा विहीबार डिजिटल चाइन समीटको...
मोबाइल एप्सबाट कसरी गर्ने कारोबार ?
काठमाडौं, २७ चैत । दशलाख भन्दा बढिले नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे कम्पनी ‘इसेवा फोनपे’ को मोबाइल एप डाउनलोड गरेका छन् । यो संख्या नेपालका बैंक, वित्तिय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो ।
विश्वकै सुपर फास्ट चार्जर, जसले १७ मिनेटमै ब्याट्री फुल गर्छ
काठमाडौं । सायोमीले विश्वकै सुपर फास्ट चार्जर सार्वजनिक गरेको छ । उक्त चार्जरले १७ मिनेटमै ब्याट्री फुल चार्ज गर्छ । सायोमीले विश्व कै सबैभन्दा फास्ट स्मार्टफोनलाई चार्ज गर्न सक्ने चार्जरको बारेमा जानकरी दिएको हो ।
किन भयाे गुगल प्लस बन्द ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल गुगल प्लस मङ्गलवार बिहानदेखि बन्द भएको छ । यो संसारको दोस्रो सबैभन्दा मूल्यवान ब्रान्डको असफल सामाजिक सञ्जाल मानिन्छ ।
सन् २०११ मा फेसबुक र ट्विटरलाई चुनौती दिन खोलिएको यो सर्च इञ्जिन गुगलको सामाजिक...
चिनियाँ राष्ट्रपति सिको विचार प्रचारका लागि नयाँ एप
एजेन्सी । चीनमा राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग सम्बन्धित नयाँ एप सार्वजनिक भएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिरहेको चीन राष्ट्रपति सिके विचार र गतिविधि प्रचारका लागि नयाँ एप निमार्ण गरिएको हो ।
यस एपको नाम ‘स्युएसी...
नयाँ प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्दा महिला उत्साहित
बाजुरा, १६ चैत । बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकाले हाइटेक प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्दा महिला उत्साहित बनेका छन् ।
नगरपालिकाका सबै वडामा तरकारी खेती गर्नका लागि उपयुक्त जमीन पर्याप्त भए पनि अनुभव तथा सीप नभएका कारण तरकारी...
अब हुलाक सेवाको के काम ?
पाल्पा, २० फागुन । कुनै बेला हुलाक सञ्भारको शसक्त माध्यम थियो । टाढा टाढा अथवा विदेशमा रहेका मानिसहरुले हुलाकबाटै घर चिठ्ठी पठाउने गर्दथे ।
विदेशमा रहेको छोरोले पठाएको चिठ्ठी पढ्न लगाउन गाउँमा पढे लेखेका मान्छे खोज्दै...
नेपाली युवाले बनाए सिसी क्यामेरालाई चुनौती दिने प्रविधि
ताप्लेजुङ, १३ फागुन । ताप्लेजुङका एक युवाले सिसी क्यामेरालाई नै चुनौती दिने प्रविधिको विकास गरेका छन् । मेरिङ्देन गाउँपालिका–४ लिङ्तेपका पूर्णकुमार लम्वालिम्बूले ‘अटो सेक्युरिटी सिस्टम’ नाम दिएर तयार गरेको यो प्रविधिले...